Taye Dendea! Karaan deemtan Gundoo kan isin hafu Guddoo ta’uu erga beektanii – Kichuu
HomeTaye Dendea! Karaan deemtan Gundoo kan isin hafu Guddoo ta’uu erga beektanii
Karaan deemtan #Gundoo kan isin hafu #Guddoo ta’uu erga beektanii karaa dheeraa hafu xumuruuf waantota hatatamaan raawwachuu qabdan keessaa muraasa,
1 Hidhaamtoota Siyaasaa Oromoo yakka tokko malee mana hidhaa jiran hunda hiikuu
2 Warra Hacaaluu ajjeesee fi ajjeesise seeratti dhiheessuun adabbii madaalawaa itti kennuu/kennisiisuu,
3 Miidiyaalee Oromoo cufaman hunda akka banama taasisuu,
4 Gaaffii Oromoo waggoottan hedduuf gaafatamaa turan dhawata dhawataan deebisuu (Gaaffii Afaanii, Abbaa biyyummaa Finfinnee, gaaffi dinagdee, hawaasummaa fi wal qixxummaa…..)
5 Jarmiyaalee Siyaasaa karaa nagaan qabsaawaa jiran hunkuruu irraa of qusachuun Filannoon bilisa ta’e akka gaggeeffamu fi Oromoon abbaa barbaade akka filatu haala mijeessuu,
6 Dimookraasiin dhugaa biyya kana keessatti akka jalqabu taasisuu (Oromoon Sirna Gadaa qabu dheebuu Deemokraasii keessaa bahuu qaba waan ta’eef)
7 Walumaa galatti #Oromummaan Cabee hin beeku hin cabus, kana beekuun Oromummaa cabsuuf yaaluu irraa of qusachuu!!
8 Oromoon Mariif waantota hin dhiheessine seeraan beekuu fi tiksuu
Tan Hafte Guddoo dha!
Dhugaa dha! Waan waliin dhabne malee waan irratti wal-dhabne hin qabnu! Dhugaa kana ganna sadi duran himne! Garuu sun namoota gariif hin galle! Saniif burjaajofnee bakka wal-tumsuu qabnutti wal haqabqaalle! Gaafa waliin duuluu mallu walitti duulle! Keessattuu waggoota lamaan darban gatii hin malle kanfalle! Injifannoo waliin finne wal-harkatti kuffisuuf guddoo yaalle!
Eeyyeen! Fedhii fi faayidaan keenya tokkummaan guutama! Facaanaan waan duraan qabnutu harkaa nu dhabama! Diinni kana beekee tokkummaa keenyatti gama! Injifannoo keenya danquuf gantoota muraasa bitee nutti bobbaase! Gantuun ammoo “sabboonaa” fi “cundhuuraa” jedhee olola diiggaa afarse! Kijibaan diina faarsee fira diinomse! Olola santu saba fayyaalessa burjaajesse! Ummata afaan tokkoo afaan-afaan taasise! Warra waliif jecha waliin qabsaaye waan hin jirre irratti wal lolchiise!
Amma maaltu mala? Namni bacaan gaabbii keessa jiraatuu dhageenya. Garuu gaabbiin homaa hin buusu! Gabaa dabarte hin dhaqan! Aanan jiges haguma dhaqqaban ol-qaban! Gaabbii wahiifuu hin tolle haa dhiifnu! Qajeeltoo keenyatti haa deebinu! Waan waliin dhabne malee waan irratti wal dhabne hin qabnu! Kan nu burjaajessu gantuu fi diina ta’uu yaa hubannu! Qabsoo keenyaan waa danuu arganne! Juntaa ganna 27f lammii fi biyya nu harkatti nyaate akka dansaa injifanne! Lamuu akka hin kaane! Injifannoo kana waliin haa tikfannu! Ammoo wanti argatuu mallu hedduun akka hafu yaa beeknu! Sanis waliin haa barbaadannu! Shakkii fi tuffii haa lagannu!
Eeyyeen! Dogongorri silaa hojjatamuu baatee mishaa dha! Garuu nama ta’uu keenya hin dagannu! Waan akka namaa daguutti balleessine hin deebifnu! Kan darbe irraa haa barannu! Badii kalee fi dheengaddaa irra waliif haa ceenu! Gantuu fi yartuu qofa haa moggeessinu! Hundaa ol tokkummaa jabeeffannee fuulduratti haa fuulleffannu! Ammoo ofirraa haa kaanu! Akka dhuunfaatti beekumsa, gahumsaa fi naamusa haa tolfannu! Namni waan ofiif hin qabne namaaf hin kennu! Namni jiruu ofii moo’ate, namni maatii ofii jabeeffatee fi ilmaan ofii sirnaan guddifate biyyaaf hojjate! Of qajeelchutu dursa!
Tan dabarte gundoo! Tan Hafte Guddooo!!
“Gaafa Ilmi naaf gahe…”
Kabajamoo Abbaaduulaa Gammadaa finxaleyyii bitaa-mirgaatu hamata. Gariin jabina isaanii hubatuun seenaa dabsuuf diineffatee jibbaan itti xiyyeeffata! Firri ammoo wallaalaaf diina waliin isaan komata. Dhugaaf taanan garuu Abbaaduulaan Goota! Gooti akkasii jaarraatti takka dhalata!
Kabajamoo Abbaaduulaan Itoophiyaaf gaaddisa guddaa dha! Kufaatii biyyaa oolchuuf qabsoo gegeeffame keessatti qooda gita hin qabne bahan. Gaafa gariin wuskii fi saamicha faana fiigu isaan dhaloota ijaarutti fuulleffatan. Dhaloota hooggansa isaanii jalatti baratetu fincilee sirna cunqursaa raase. Hooggansa jabaa paartii isaan ijaaran keessatti kunuunsa isaanitiin guddatetu biyya illachaa Juntaa keessaa baase! seenaa Qeerroo fi hooggansa jijjiiramaa namuu beeka!
Kabajamoo Abbaaduulaa irraa waa danuutu baratama. Kan ammatti xiyyeeffannoo fedhu garuu waa lama. Tokko fageessanii karoorsuun ibsama. Bara 1998 keessa “Yoom mataa ol-qabatta?” jedhamnaa “Gaafa ilmi naaf gahe” jechuun isaanii ni yaadatama. Hardha ilmi gaheera! Lammati ashaaraa kaayuun laalama! Kabajamoon bara 2011 kabajaan hooggansa dhiisuun ni beekama. Gaafas “Dhaabni koo akka na waliin dulloomu hin barbaadu” jechuun isaanii yoomiyyuu caalaa hardha hubatama. Namni seenaan DhDUO fi seenaa TPLF qixaan wal-biratti ilaale guddummaa kabajamoo Abbaaduulaa hubatuuf danuu waan rakkatu hin fakkaatu! Ammoo jabaa hamatuun hin haftu! Garuu hamiin seenaa dhugaa hin geeddartu! Ulaagaa kamiinuu warri akka adurree ilmaan of jalatti nyaatu kabajamoo Abbaa-duulaa qeequuf hamileewahiituu hin qabaatu!